Anatinà Espaina Mivaky, Midika Inona ny Maha-Espaniola? · Global Voices teny Malagasy
To celebrate the country's diversity, according to one woman's viral message.
Voadika ny 11 Oktobra 2017 5:07 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, Ελληνικά, русский, čeština , English
“+ FITIAVANA” voasoratra eo amin'ny rindrina iray ao Barselona tamin'ny 2009. Sary an'ilay mpampiasa Flickr, Almusaiti. CC BY-SA 2.0
“Mitriatra” no teny ho an'ny anio (09/10/17) ao Espaina, toerana izay tsy hoe fotsiny ilay fitakian'i Katalàna fahaleovantena sy ny setriny avy amin'ny governemanta Espaniôla dia manosika ny firenena ho lasa faritra tsy hay mazava izay politikany, fa koa mamafy ny voan'ny fankahalàna.
Marobe no mampitandrina hoe ity olana ity dia hiteraka fitomboan'ny toetsaina “isika mifanandrina amin-dry zareo” izay tena mampididoza tokoa noho ny fahatsorany ary tsy dia mahazatra loatra ho anà firenena iray izay taompolo efatra monja talohan'izao dia teo ambany jadona fasista iray.
Raha to ianao tsy mpomba ny fitsapankevibahoaka tamin'ny 1 Oktobra, izay nosakanan'ny Fitsaràna momba ny Lalàm-panorenana ao Espaina ary nambaran'ny governemanta foibe ho tsy araka ny lalàna, dia tsy maintsy mpanohitra ny Katalàna ianao izay. Raha toa ianao tsy nitehaka ireo hetsika nataon'ny governemanta foibe, isan'izany ny herisetra nataon'ny polisy tamin'ireo Katalàna mpifidy, dia tsy maintsy mpanohitra an'i Espaina ianao izay. Ny teny Espaniola no hany teny ofisialy, na ny Katalàna. Tsy misy afa-tsy anaram-pamantarana tokana: ny Espaniôla, ary anaram-pamantarana Katalàna tokana. Tian-kano, tsy tian-kano io.
Miraradraraka ireo hafatra tahàka izany. Saingy moa ve ny toedraharaha tena mihenjan-droa tahaka izany, ary tena tokambolo ve i Espaina? Raha tsaraina avy amin'ny lazan'ny lahatsoratra iray tao amin'ny pejy Facebook-n'ny ramatoa iray momba ny dikan'ny maha- Espaniôla, tsia no valiny.
Tanaty taratasy iray niparitaka be, i Laura Moreno de Lara dia mamaritra Espaina iray izay tsy hoe fotsiny mankalaza ireo kolontsaina maro samihafa, fombandrazana ary fiteny isankarazany hita ao anatiny, fa koa mamaritra ny tenany avy amin'izany fahasamihafàna izany. Firenena iray tsy manabantibanty ary tsy misy herisetra, fa anjakan'ny fitiavana sy ny firaisankina.
Ny 2 Oktobra no nivoaka voalohany ilay lahatsorany, ary avy eo dia nozaraina betsaka tany amin'ny WhatsApp. Toy ny nisy akony lalina tany amin'ireo vahoaka nanerana an'i Espaina ilay izy, nisarika ‘tia’ maherin'ny 324.000 ary fanehoankevitra 37.000 hatreto.
Nambaran'i Moreno de Lara tamin'ny tranonkalam-baovao Verne fa niriany ny mba “hanova hifanaraka amin'ny maha-olona” ny fotokevitry ny maha-Espaniôla taorian'ny nahitàny olona maro niresaka momba ny maha-izy azy nojerena tamin'ny maso politka. Ity ambany ity ny dika avy aminilay hafatra nalefany arahan'ireo fanamarihana ho an'izay tsy dia mahafantatra loatra an'i Espaina:
Tsia ry malala, tsy Espaniôla ianao. Tsy hoe Espaniôla rehefa milanja ny saina, na mihiakiaka fehezantenim-pankahalàna izay antenaiko fa tsy tsapanao. Tsy hoe Espaniôla rehefa mitondra haba eny amin'ny hato-tànanao, na mihira [ny faneva fasista] “El Cara al Sol.” Zavatra tena hafa mihitsy ny dikan'ny fotikevitra maha-Espaniôla, na farafahakeliny izany no tokony ho izy, satria amin'izao teboka misy ny tantara izao dia tsy haiko intsony hoe inona no hambara aminao.
Amin'ny maha-vehivavy Espaniôla ahy, dia lazaiko aminao ny dikan'ny hoe maha-Espaniôla ho ahy:
Ny maha-Espaniôla dia ny mirehitra koa rehefa mirehitra ny Doñana [Valan-javaboahary Nasionaly] [noho ny doro ala] na mihovitra rehefa mihovitra i Lorca [tao anatin'ilay horohorontany tamin'ny 2011]; ny mipetraka ary mihaino ireo tantaranà meigas [mpamosavy] tany Galicia ary manomboka mino azy ireny; ny mandeha mankany Valansia ary tsy mahatsiaro ho tezitra eo am-pamakiana takelaka iray amin'ny fiteny Valansiàna, fa mankasitraka noho ny fahafahanao nahatakatra izany; ary ny miaiky fa tsy manan-draharaha eo amn'ireo Nosy Canary ireo avy any Karaiba.
Ny fahatsapàna ho Espaniola dia ny falahelòvana noho ny tsy nahafahana niaina tao anatin'ilay Movida Madrileña [hetsika nanozongozona ny resaka kolontsaina], ny latsa-pitiavana ny ranomasina rehefa mihaino ilay hira “Mediterranean” an'i [mpanoratra tononkira no sady mpihira, Joan Manuel] Serrat, ny manontany an-kamamoana amin'ny Katalàna namanao mba hampianatra anao ny fandihy sardana, ny maniry handeha ho any Albacete mba hijery raha toa ny fetiben-dry zareo any an-toerana ka tsara koa noho ny an'ny Malaga, ary ny tsy gaga amin'ny hatsaràn-tarehin'ny Ceuta [zaratany Espaniola any amin'ny ilany Avaratr'i Afrika].
Ho ahy, ny maha-Espaniola dia ny midedadedaka hoe manana torapasika isika ao Andalusia, manana ranomandry sy tanihay, ny mahatsapa toy ny zavabitako ahy mihitsy ny hoe ambivitry ny hahazo Loka Nobel ny olona iray avy any Alicante ; ny manontany amin'ny Asturian iray mba hampiseho amiko ny fomba fandraraka taoka cidre; ny matim-pitiavana eo am-pijerena ireo torapasiky ny Firenena Baska ao amin'ilay Lalaon'ny Seza Fiandrianana (Game of Thrones).
Espaniola ihany koa ilay fisotroana labiera rehefa amin'ny iray ora folakandro, ny orujo [likera ] Galisiana, ny siesta, calimotxo [fangaronà divay mena sy cola, malaza any amin'ny Firenena Baska], paella, ny mofomamy St. James, ny kiendiendy sy ny ovy voaendin'ny renibenao. Ny atao hoe Espaniola dia ny faniriana haneho ny tsara indrindra amin'ny tanànanao amin'ireo izay tonga avy any rehetra any ary manontany azy ireny momba ny tany niaviany; ny lasa mpinamana amin'ireo olona Baska ary mangataka azy ireny mba hampianatra anao ny tarehimarika amin'ny Euskera, raha toa ianao miverina mody ka mitondra pintxos 2 na 3 [tsaky kely zaraina any amin'ireo toerana fisotroana]; ny mahatsapa rehareha noho ny maha-firenena iray eto mpisava làlana amin'ny famindràna taova manerana izao tontolo izao, amin'ny maha-tany iray ahitàna kolontsaina an'arivony, ary amin'ny fahatsapan'ny hafa antsika ho manana saina falifaly mandrakariva.
Tsy misy zavatra hafa tena maha-Espaniola ankoatry ny fitsanganam-bolo rehefa mihaino saeta na copla angolaina fatratra, mijanona eo amin'ny torapasik'i Cadiz mandra-pahamaizina, ny mahita saiky anaty hamaivanan-doha ilay helodrano maharevo ao Mallorca, ny fanaovana [fivahinianana] rehefa volana Septambra any Camino de Santiago , misedra ny hatsiaka mamirifiry, na ny fanànana ny tanànan'i Salamanca sy Segovia mampiseho aminao fa ianao dia tsy voatery ho goavana be vao ho tsara tarehy.
Araka izany, ry acho, picha, miarma, perla, tronco, tete [karazam-pitenenana feno fitiavana ampiasaina any amin'ny faritra], ry zanako… izany no atao hoe maha-Espaniola, resaka politika ny ankoatra izay. Saingy raha mbola ampidiranareo resaka politika ihany ao anatin'io fotokevitra io, dia hambarako anareo indray mandeha indray fa diso ianareo: satria ny maha-Espaniola tsy faniriana ny hamelaka ny tavan'ny olona iray, fa fahatsapàna ny fanaintainan'ny mpifanolo-bodirindrina aminao noho ny tsy fananany asa na ny fanesorana an-kery hitanao amin'ny fahitalavitra ; tsy ny mamoritra ny ENY na TSIA aminà vondrom-piarahamonina iray manontolo mizaka tena no maha-Espaniola, fa ny mitraotra rehefa lazain-dry zareo isika fa toy ny kaondrana isaky ny misy tranga vaovao aminà kolikoly; ny maha-Espaniola mendrika dia faniriana mba hisian'ny firenena iray lavitry ny fahantràna sy ny tsy fahalalàna, firenena iray tsy hisy marary hokarakaraina eny an-dalantsaran'ny hopitaly ary, faniriana ny hipetraka eto mba hiasa sy hanome valimbabena amin'izay rehetra tena nianaranao nandritra ny fotoana maro teto.
Izany no atao hoe maha-Espaniola, na farafahakeliny, izany no antenaiko.